Ibhizinisi Le-Seedy: Yikuphi Ukudla Okukhulu Okucashile ngomkhankaso we-GMO PR - Ilungelo Lethu Lase-US
Ibhizinisi lakwaSeedy: Yikuphi Ukudla Okukhulu Okucashile ngomkhankaso wayo we-GMO PR
Posted on January 20, 2015 by UGary Ruskin
Ukukhishwa Ngokushesha: NgoLwesibili, Januwari 20, 2015
Landa umbiko ku-https: //usrtk.org/seedybusiness.pdf
I-US Right to Know - inhlangano entsha engenzi nzuzo - ikhiphe i- umbiko omusha namuhla emkhankasweni we-Big Food's PR wokuvikela ama-GMO: ukuthi iyisebenzisa kanjani imithombo yezindaba, umbono womphakathi kanye nezombusazwe ngamasu aqatha, ithenge isayensi ne-PR spin.
Kusukela ngo-2012, izimboni zezolimo nezokudla ziye zaba nobudlelwano bomphakathi obuyinkimbinkimbi, obunezici eziningi, ukukhangisa, ukunxenxa nomkhankaso wezepolitiki e-United States, okubiza kakhulu ngaphezulu kwe- $ 100 million, ukuvikela ukudla nezitshalo ezakhiwe ngezakhi zofuzo kanye nezibulala-zinambuzane ezihambisana nazo. Inhloso yalo mkhankaso ukukhohlisa umphakathi, ukuphambukisa imizamo yokuwina ilungelo lokwazi ukuthi yini esekudleni kwethu ngokulebula okuvele sekudingeka emazweni angama-64, futhi ekugcineni, ukunweba inzuzo yabo isikhathi eside ngangokunokwenzeka.
Lo mkhankaso ube nomthelela omkhulu ekutheni abezindaba base-US bahlanganisa kanjani ama-GMO. Inkampani ye-PR yomkhakha wale mboni, uKetchum, uze wazishaya isifuba ngokuthi “ukusakazwa okuhle kwabezindaba sekuphindwe kabili” kuma-GMO.
The umbiko ichaza izinto eziyishumi nanhlanu ezifihlwa yiBig Food ngomkhankaso wayo wobuciko we-PR kuma-GMO.
#1: Izinkampani zezolimo zinomlando wokufihla izingozi zezempilo emphakathini. Kaningi izinkampani ezikhiqiza ama-GMO zifihle abathengi nabasebenzi iqiniso ngobungozi bemikhiqizo nokusebenza kwazo. Ngakho-ke singabethemba kanjani ukuthi bazositshela iqiniso ngama-GMO abo?
#2: I-FDA ayihloli ukuthi ama-GMO aphephile yini. Imane ibukeze imininingwane ethunyelwe izinkampani zezolimo.
#3: Inqubomgomo yesizwe sethu yokuxega kuma-GMO ngumsebenzi wempi yokulwisana nokulawula yowayenguPhini likaMongameli uDan Quayle. Yenzelwe futhi yathunyelwa njengomusa wezepolitiki kuMonsanto.
#4: Yini izimboni zezolimo nezogwayi ezifanayo ngayo: amafemu e-PR, ama-opharetha, amaqhinga. Umkhankaso we-PR wakamuva wemboni yezolimo ufana ngandlela-thile nomkhankaso we-PR owedume kakhulu embonini yezimboni kagwayi yokubalekela umthwalo wokufa kwamakhulu ezinkulungwane zabantu baseMelika unyaka nonyaka.
#5: Inkampani yaseRussia i-PR isebenza ngomkhakha wezolimo omkhulu we-PR salvo kuma-GMO. Asithembi inkampani i-PR iKetchum lapho ijikeleza iRussia noMongameli Putin. Kungani kufanele sethembe ukujikeleza kwayo kuma-GMO?
#6: Amaqembu aphambili embonini yezolimo nama-shill awethembekile. Abameli abaningi abahola phambili embonini banamarekhodi okuvikela okungenakwenzeka, noma amanye amahlazo nokuziphatha okungadali ukuzethemba.
#7: Izinkampani zezolimo zisebenzise amasu e-PR anyanyekayo. Lawa maqhinga afaka ukuhlaselwa kososayensi nezintatheli, kanye nokugeza izingane engqondweni.
#8: Izinkampani zezolimo zinomshini wezepolitiki onamandla, onobuhle. Banobambiswano ezindaweni eziphakeme, futhi basebenzisa amandla abo ngamandla - futhi kwesinye isikhathi ngenkohlakalo - ukuvikela nokwandisa izimakethe zabo nenzuzo yabo kuma-GMO.
#9: Ingxenye yamafemu ezolimo amakhulu eBig Six ayikwazi nokukhulisa ama-GMO awo emazweni abo. Ngenxa yezingozi zezempilo nezemvelo zama-GMO, izakhamizi zaseJalimane naseSwitzerland ngeke zivumele ukulinywa kwembewu ye-BASF, Bayer neSyngenta's GMO.
#10: IMonsanto isekele ilebuli ye-GMO e-UK kepha iyaphikisana nayo e-USA. Yize iMonsanto izinze eSt. Louis, eMissouri, iMonsanto ikholelwa ukuthi izakhamizi zaseBrithani zifanelwe amalungelo abathengi aqinile kunalawo aseMelika.
#11: I-treadmill ye-pesticide izala inzuzo, ngakho-ke kungenzeka iqinise. Kusenzuzo yezimali yezinkampani zezolimo ukukhuthaza ukuvela nokusakazeka kokudla okunezifo eziyingozi kakhulu kanye nezilokazane, ngoba lokhu kuzokhuthaza ukuthengiswa kwenani elikhulu kakhulu lezibulala-zinambuzane ezibiza kakhulu.
#12: Isayensi ye-GMO iyathengiswa. Isayensi ingaphazanyiswa, ithengwe noma ichemile embonini yezolimo ngezindlela eziningi, njengokucindezela okutholakele okubi, kulimaze imisebenzi yososayensi abenza lokho okutholakele, ukulawula ukuxhaswa kwemali okwakha lokho kwenziwa ngocwaningo, ukungabi bikho kokuhlolwa okuzimele okususelwa e-US yezingcuphe zezempilo nezemvelo zama-GMO, nokuthinta ukubuyekezwa kwesayensi kwama-GMO ngokushayisana kwezintshisekelo.
#13: Cishe azikho izinzuzo zabathengi zama-GMO. Ama-GMO adliwa ngabantu baseMelika awanempilo, aphephile noma anomsoco ngaphezu kokudla okuvamile. Azibukeki zingcono, futhi azinambitheki kangcono. Nganoma isiphi isilinganiso abathengi abasikhathalelayo empeleni, akusiyona intuthuko nganoma iyiphi indlela. Inzuzo evela kuma-GMO iqongelela izinkampani zezolimo, kuyilapho izingozi zezempilo zithwalwa abathengi.
#14: I-FDA nezinkampani zokudla bebe nephutha ngaphambilini: basiqinisekisile ngokuphepha kwemikhiqizo ebingaphephile. Izidakamizwa eziningi nezithasiselo zokudla ezivunyelwe yi-FDA emakethe ngemuva kwalokho zivinjelwe ngoba zinobuthi noma ziyingozi.
#15: Ezinye izinto ezimbalwa imboni yezolimo ayifuni ukuthi wazi ngazo: ubugebengu, amahlazo nokunye okungalungile. Amafemu amakhulu ayisithupha embonini yezolimo - iMonsanto, iSyngenta, iDow, iDuPont, iBayer neBASF - abambe iqhaza emisebenzini eminingi esolisayo ukuthi ukuyibhala kuzodinga okungenani incwadi yonke.
I-US Right to Know iyinhlangano yokudla engenzi nzuzo entsha. Siveza lokho izinkampani zokudla ezingafuni sazi ngokudla kwethu. Simela ilungelo lokwazi ukuthi yini ekudleni kwethu. Siletha ukuziphendulela ku-Big Food nakwezombusazwe abathobelayo. Ngeminye imininingwane, sicela ubheke iwebhusayithi yethu ku usrtk.org.
I-GMO, Ukukhishwa Kwezindaba